သက်ဝေ: စွယ်တော်ရိပ်မှ အမှန်တရားများ
Posted by သက်ဝေ at 12:19 PM
မေဇင် July 31, 2009 at 12:50 PM
မမ ရေ...ကဗျာလေးက စက်မှုကျောင်းသားတွေ မပြောနဲ့ နောင့် တို့တောင် ဖတ်ရတာ ကျောင်းသားဘ၀ ကိုပြန်လွမ်းသွားတယ်....။ စွယ်တော်ရိပ်မှ အမှန်တရား များဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖတ်လှတယ်.။ အမှန်တွေကိုး....
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ July 31, 2009 at 1:34 PM
ဟုတ် မဖတ်ဖူးပါဘူးခင်ဗျ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ
Anonymous July 31, 2009 at 2:15 PM
အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ .. assume နဲ့ neglect ပိုင်ရင် အင်ဂျင်နီယာပဲတဲ့...
ဒါကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြောကြတာပါ..။ ဟီး
ဆရာဝန်တယောက်ကြောင့် လူတယောက်ပဲ ဆေးထိုးမှားရင်သေနိုင်ပေမဲ့ civil အင်ဂျင်နီယာတယောက်က လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို သေစေနိုင်တယ်တဲ့..။
Rita July 31, 2009 at 9:24 PM
ဟိုက် အဲဒါတွေ သင်တဲ့နေ့က ကျောင်း မတက်ဖြစ်ဘူးလား မသိဘူး။ ဘာမှ မသိပါလား။
sonata-cantata August 1, 2009 at 12:43 AM
01 10 တွေ ရေးချနေတုန်း အံ့သြတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ လူတယောက်က လာကြည့်တယ်...ကိုယ့်ဖာကိုယ်တော့ ငါကွ..ကြိုးစားထားပေါ့...(သူကတော့ သွားရှာပြီး ဆိုပြီး ကြည့်နေတာ)
khin oo may August 1, 2009 at 7:51 AM
နားမလည်တာတွေလာဖတ်သွားတယ်။. ကိုကို အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်း တက်တုံးကသူ့ကျောင်းစာတွေ ကူးပေးဘူးတယ်။မအောင်မြင်ဘူး.ဘာတွေ ရေးထားမှန်းမသိတာနဲ့ အာလဖာတွေါဖဘီတာတွေ စကွဲတွေ. ဂဏန်းတွေ..
pandora August 1, 2009 at 8:58 AM
Rita August 1, 2009 at 12:03 PM
မမသီတာ ရေးတာဖတ်ပြီးမှ တခု သတိရမိသေးတယ်။
Data Com. ဖြေတဲ့တစ်နေ့ပေါ့။ မေးခွန်းစာရွက်မှာ decode လုပ်ရမဲ့ bit stream ကြီး တစ်ခု ကျန်ခဲ့တော့ အတန်းရှေ့က black board မှာ အခန်းစောင့်ဆရာက ရေးပေးတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း0နဲ့ 1 တွေချည်း။ အတူဖြေတဲ့ civil တွေ ဟားဟားဟား လုပ်တယ်။
yu August 2, 2009 at 9:44 AM
thanks for your sharing.I miss my university after reading this post.Now,I try to get proficency in assuming and neglecting skill in QS field.....Ha Ha....
တန်ခူး August 3, 2009 at 7:41 PM
သက်ဝေရေ... ကဗျာလေးဖတ်ပြီး လွမ်းသွားတယ်... အရှည်ကြီး တနင့်တပိုးကြီး လွမ်းသွားတာ... သူငယ်ချင်းတယောက် မျက်လုံးလေးလှလှလေးခြယ်သထားတာ workshopမှာ သံထည်ကို မီးအပူပေးတော့ ချွေးလေးတွေက ကာလာစုံလေးတွေကျလာတာ သတိသွားရမိတယ်...
T T Sweet August 3, 2009 at 11:37 PM
မသက်ဝေကတော့ သူတစ်ယောက်တည်း လွမ်းလို့ အားမရ သူများတို့ကိုပါ လွမ်းအောင်လုပ်နေပြီ... :D အားလုံးသတိရပါတယ်။ စာတွေကလွဲလို့ ... အတန်းထဲမှာ ဆရာစာသင်တာ စိတ်မ၀င်စားပဲ သူနဲ TT တို့ အတန်းထဲက လူတွေနားရွက်တွေချည်းလိုက်ကြည့်ပြီး တခွိခွိရယ်ကြတာ ... သူများတို့တဖွဲ့လုံးပါ လိုက်ရယ်မိကြတာ ... သတိရတယ် ...
ပုလုကွေး August 5, 2009 at 11:28 PM
်မမရေ ဖတ်ဖူးဘူးဗျ. ပရင့်ထုတ်ထားပီး အိမ်မှာကပ်ထားမယ်...
သက်ဝေ August 6, 2009 at 9:14 AM
နောင့်... ဟုတ်ပ လွမ်းစရာ...
ရွာသားလေးနဲ့ ပုလုကွေး... မဖတ်ဖူးဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က ငယ်ပါသေးတယ် လို့ သွယ်ဝိုက်ပြောသွားတာ ဟုတ်... သိတယ်နော်...
မြတ်နိုး... ဒီစကားနဲ့ ကိုယ် သူ့ကို အနိုင်လုနေကျ...
ရီတာ မသီတာ...01, 1 0, 1 0,01.. ဟီဟိ
မမခင်ဦးမေ ပန်ပန်... မသိပေမယ့် လာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူး...
ယု... Assume & Neglect ကတော့ ပိုင်ပါတယ်လေ နော်... ခုထိအောင် အသုံးကျနေဆဲ...
တန်ခူး... ကျောင်းတက်တုန်းက အကြောင်းတွေ တွေးမိရင် တကယ်ကိုပဲ သတိရ လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်...
ဆွိရေ... ရှင်က တော်တော်မှတ်မိတာပဲ.. နားရွက်တွေ ကြည့်ပြီး ရယ်တဲ့အကြောင်းကို ကိုယ်တောင် မေ့နေပြီ... ရယ်ကြတာကတော့ ပြောမနေနဲ့... TT နဲ့ တို့နဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းမိရင် မရှိ ရှိတာကို ကြံဖန်ပြီး ရယ်ကြတာ အခုထက်ပဲ...
စာတွေကလွဲလို့ အားလုံးသတိရတယ်ဆိုတဲ့ စကားကတော့ အမိုက်ဆုံးပဲ... :-P
tg.nwai August 13, 2009 at 5:04 AM
လွမ်းစရာပါလား သက်ဝေရယ်.. တို့တွေလည်း မသေချာတဲ့ လောကကြီးထဲ ၀င်ဖို့ assume လုပ်လိုက် neglect လုပ်လိုက်.. trial and error တွေနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်နဲ့..ကျောင်းတော်ကြီးက သင်ပေးလိုက်တာကိုး။ ဟဲဟဲ။ black smith workshop တုန်းက နီနီရဲရဲ သံတုံးကို ပုဆိုးနဲ့ ခံပြီး ဖမ်းလိုက်တဲ့ တယောက်လည်း ဘယ်နေရာမှာ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေပြီလဲ မသိ။ ကိုယ့် သံတုံး မီးစားသွားလို့ သူများ သံတုံးခပ်တည်တည်ယူသွားတဲ့ တယောက်လည်း တော်တော် အရာရောက်လောက်ပြီ။